Xaashida xogta – Ministry of Women and Human Rights Development
Xaashida xogta	wand	2017-08-01T10:03:11+00:00
Xaashida xogta ku saabsan dhismaha Guddiga Madaxa bannaan ee Xuquuqul Insaanka
Waa maxay Guddiga Madaxabanaan ee Xuquuqul Insaanka?
Guddiga Madaxabanaan ee Xuquuqul Insaanka (GMBXI) waa hay’ad qaran oo madax bannaan, taas oo yeelan doonta mas’uuliyad xileed ay ku ilaaliso, ku xoojiso, uguna ololeyso arrimaha xuquuqul insaanka ee Soomaaliya. Mas’uuliyad xileedka guddiga wuxuu ku qeexan yahay Dastuurka Ku meel gaarka Soomaaliya iyo Sharciga lagu dhisay Guddiga Madaxabanaan ee Xuquuqul Insaanka ee lasoo saaray sanadkii 2016kii.
Sharciga lagu dhisay Guddiga Xuquuqul Insaanka ma yahay mid hadda dhaqan gal ah?
Haa, hindise sharciyeedkii qabyada ahaa ee lagu dhisay Guddiga Xuquuqul Insaanka waxaa la saxiixay oo la sharciyeeyay 14kii Agosto 2016kii, waxaana lagu saxiixay xaflad uu shir guddoominayay Madaxweynihii hore, Xasan Sheekh Maxamuud. Markii la saxiixay hindise sharciyeedka, Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa loo fududeeyay inay dhisto Guddiga si waafaqsan sharciga.
Meeqo ayay noqonayaan tirada xubnaha GMBXI?
GMBXI wuxuu ka koobnaan doonaa (9) Xubnood. Ugu yaraan 3 haween ah iyo ugu yaraan 1 xubin oo ka mid ah dadka baahida gaarka leh. Sharciga ayaa qeexaya shuruudaha loo marayo dhismaha guddiga. Sharcigan ayaa xaqiijinaya in guddigu ahaado guddi madax bannaan, lagu kalsoonaan karo oo dadka metela si wax ku ool ah loogu ilaaliyo looguna xoojiyo xuquuqul insaanka Soomaliya
Dowladda miyaa magacaabaysa xubnaha GMBXI?
Maya. Xubnaha Guddiga waxaa lagu soo xulayaa shuruudaha ku qoran sharciga, waxayna ka turjumayaan metellaadda dowlad goboleedyada ka tirsan dawladda Federaalka ee Soomaaliya. Shuruudaha lagu soo xulayo Xubnaha GMBXI waxay ku qoran yihiin Qodobka 8aad ee Hindise Sharciyeedka Guddiga Xuuqul Insaanka. Shuruudahan waxaa adeegsanaya guddiga soo xulidda si ay u hubiyaan dadka soo gudbiyay araajida codsiga kuwooda ugu habboon xubinimada guddiga. Geedi socodka magacaabistu waa mid aad u caqabad badan maadaama la filayo in tiro dad ah oo badan ay soo gudbistaan codsiyo, loona baahan yahay in geedi socodka la waardiyeeyo si loo ilaaliyo madax bannaanidiisa iyadoo la xaqiijinayo heerka ugu sarreeya ee hufnaanta. Si loo xaqiijiyo in taasi ay dhacdo, wasaaradda ayaa wadatashi la sameysay madaxda maamul goboleedyada waxayna soo xuleen 19 xubnood oo la aaminsanyahay inay leeyihiin daacadnimo sare.
Waa maxay dowrka Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanku ay ku leedahay soo xulidda?
Wasaaradda HHXI waxay ka shaqaynaysaa oo korjoogtaynta iyo fududaynta hawlaha guddiga fulinaya geedi socodka soo xulidda. Wasaaraddu kama mid aha guddiga, sidaas darteed, ma lahan xaqa codeynta ee loo codeynayo musharaxiinta. Si kastaba ha ahaatee, Wasaaraddu waxay si rasmi ah u daah furaysaa geedi socodka soo xulidda, markii la soo afjaro soo xulista, Wasaaraddu waxay musharraxiinta la soo xulay hor geyneysaa Golaha Wasiirada si loo ansixiyo, baarlamaankuna way ansixin karaan wayna diidi karaan liiska. Haddii liiska la horkeenay golaha shacabka ay diidaan, guddiga ku meel gaarka ah ee xulista waxaa dib la iisu soo yeerayaa si loo soo xulo oo loogu soo bandhigo baarlamaanka liis guddi oo cusub.
Sidee ayay soo xuliddu u dhacaysaa?
Geedi socodka soo xulidda waxaa lagu qeexay Sharciga lagu dhisayo Guddiga Xuquuqul Insaanka waxaana loo sii kala qeybiyay sida hoos ku qoran oo dulmar guud ah:
Inkasta oo muddooyinka/xilliyada hoos ku qoran ay ku tilmaaman yihiin hindise-sharciyeedka oo ay leeyihiin awood sharci, dowladda ayaa go’aamin karta in waqti dheeraad ah lagu kordhiyo si loo damaanad qaado geedi socod soo xulid oo cadaalad ah, daah-furan oo dhexdhexaad ah.
30 maalmood gudahood, ka dib marka sharciga la saxiixo: Wasiirka Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka ayaa dhisaya Guddiga Soo xulid oo Ku meel gaar ah (TSP) oo ka kooban 19 xubnood. Dhismaha guddigan waxaa lagala tashanayaa dowlad goboleedyada federaalka ka midka ah iyo ururada bulshada. Waa qabsoontay
WHHXI ayaa isugu yeeraysa shirarka Guddiga (TPS) waxayna u fududaynaysaa hawlahooda, isla markaana waxay wasaaradu kor joogeynaysaa hawlaha xulista si loo hubiyo inay habsami u dhacday hawsha xuliddu. Waa dhiman tahay
14 maalmood ka dib marka la soo xulo Guddiga ku meel-gaarka ah (TSP), Wasiirka HHXI ayaa iskugu yeeraya shirkooda ugu horreeya si ay u guda galaan geedi socodka soo xulidda xubnaha Guddiga Qaran. Waa dhiman tahay
7 maalmood gudahood, ka dib marka uu qabsoomo shirkooda ugu horreeya, Guddiga Ku meel gaarka wuxuu ku dhawaaqayaa qabashada araajida xubnaha ka mid noqonaya Guddiga Qaran, muddada ay soconayso qabashada araajida waa 30 maalmood Waa dhiman tahay
21 maalmood gudahood, ka dib marka ay dhammaato qabashada araajidu, guddiga ku meel gaarka ah (TSP) wuxuu soo gabagabeynayaa wareysiyada, imtixaanka iyo geedi socodka soo xulidda, waxayna ku dhawaaqayaan 9ka xubnood ee loo xulay xubinimada Guddiga Qaran Waa dhiman tahay
14 maalmood gudohood, ka dib marka la soo xulo 9ka xubnood, Wasiirka HHXI ayaa magacyada 9ka xubnood ee la soo gudbiyay hor geynaya/horgeynaysa Golaha Wasiirada wuxuuna ka codsanayaa/codsanaysaa in la meel mariyo. Waa dhiman tahay
7 maalmood gudahood ka dib marka Golaha Wasiirradu meel mariyaan, Golaha Wasiirradu waxay Baarlamaanka ka codsanayaan inuu ansixiyo liiska Xubnaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Xuquuuqul Insaanka Waa dhiman tahay